यसरी तौल घटाउँदै छन् विश्वकै मोटा ज्वान - Internet Khabar
यसरी तौल घटाउँदै छन् विश्वकै मोटा ज्वान
January 17, 2018 Internet Khabar Desk
काठमाडौं । ज्वान पेड्रो फ्रेन्को संसारकै मोटा व्यक्ति हुन्। गत वर्ष गिनिज बुक अफ रेकर्डले उनलाई विश्वको सबैभन्दा मोटो व्यक्ति घोषणा गरेका थियो। २५ वर्षको उमेरमा ज्वानको तौल पाँच सय ९५ किलोग्राम पुगेको थियो। उनी अहिले ३२ वर्षका भए।
अब भने उनको तौल घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । अप्रेसन नै गरेर उनको तौल घटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। डाक्टरले उनको ग्यास्ट्रिक बाइपास सर्जरी गरेका छन्, जुन सफल भएको छ । ३० जना चिकित्सकको टोलीले मेक्सिकोमा उनको अप्रेसन गरेको हो।
डाक्टरले अप्रेसन गरेर ज्वानको आन्द्रालाई दुई भागमा बाँडेको छ। अब एक भागले मात्रै पोषण तत्व ग्रहण गर्नेछ र उनले खाएको पोषणको ४० देखि ५० प्रतिशत क्यालोरी मात्रै शरीरले ग्रहण गर्नेछ ।नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।
ज्वानको जीवन मृत्युउन्मुख थियो । उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा। जोस ए केस्टानेडाका अनुसार यो अप्रेसन नगरेको भए ज्वानको जीवन द्रूत गतिमा छोटिँदै जाने निश्चित थियो । अप्रेसन सफल भएको एक महिनामा उनको तौल एक सय २० किलोमा झर्ने डा। जोसले दाबी गरेका छन् । अप्रेसन सफल भएपछि ज्वानले खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले ठीक भएपछि सबैभन्दा पहिले बाहिर सडकमा निस्केर ताजा हावा महसुस गर्न चाहेको बताए । ‘म ठीक भएर बाहिर सडकको ताजा हावा महसुस गर्न चाहन्छु । विगत १६ वर्षदेखि एउटै अँध्यारो कोठाको ओछ्यानमा कैद हुनु मुस्किल रहेछ,’ ज्वानले भने । पछिल्लो सात वर्षमा उनी केवल तीनपटक मात्रै बाहिर निस्किएको आमा मारिया सलमले बताइन्।
ज्वान डाइबिटिज, हाइ ब्लडप्रेसर र हाइपोथायरोडिज्मले पीडित छन् । उनको तौल किन बढ्यो भनेर डाक्टरले अझै पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । आमा मारियाले धेरै डाक्टरलाई आफ्नो छोराको समस्या बताउन भनिन् । तर, कसैले भन्न सकेन । त्यसैले अब उनको शरीरमा क्यालोरी नै कम पूर्ति हुने गरी अप्रेसन गरिएको हो । ज्वान १७ वर्षको उमेरमा एउटा दुर्घटनामा परेका थिए । त्यसपछि उनमा मोटोपनको समस्या निम्तियो । ‘त्यो दुर्घटनामा मेरो शरीरका आधाभन्दा बढी हड्डी टुटफुट भए । त्यसपछि अचानक तौल बढ्न थाल्यो र ओछ्यानमै रहनुपर्ने बाध्यता निम्तियो,’ ज्वानले भने ।
सफल अप्रेसनपछि ज्वान र आमा मारिया दुवै खुसी छन् । १६ वर्षदेखि छोराको सेवामा अहोरात्र खटिइरहेकी आमा डाक्टरले भनेजस्तै गरी छोराको तौल घट्ने अपेक्षामा छिन् । ज्वान पनि लामो समयदेखि कोठाभित्रै कैद हुनुपर्दाको पीडाबाट मुक्त भएर सामान्य जीवन जिउन पाउने आशामा छन्।- नयाँ पत्रिका
कस्तो दाँत भएका स्त्री वा पुरुषको स्वभाव र चरित्र कस्तो हुन्छ?
November 2, 2017 August 7, 2018
यी समस्या भए खानुपर्छ ल्वाङ
भवन नबन्दा टहराबाटै स्वास्थ्य सेवा
कुन उमेरका मानिस कति घन्टा सुत्नुपर्छ ? जान्नुहोस
December 20, 2017 August 14, 2018